ကြိုးစားလိုက်အုံး နှစ်ပေါင်း?? သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » ကြိုးစားလိုက်အုံး နှစ်ပေါင်း?? သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 9, 2011 in Opinions & Discussion, World News | 13 comments
တိုင်တလုံး ငါးမတ် တရုတ်မလေးပါး ငါနမ်း
သတင်းက နဲနဲတော့ ဟောင်းနေပါပြီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ လကုန်ပိုင်းက ရာဟူးမှာ ဖတ်ရတာပါ။ ဆြာသစ်မင်းရဲ့ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး အခြေခံအချက်များ ဆောင်းပါးကြောင့် နောက်ကျပေမဲ့လည်း ဆက်စပ်နေလို့ တင်လိုက်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြောရင် တရုတ်နိုင်ငံသည် Vaccine ကာကွယ်ဆေး ဈေးကွက်ကို နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဝင်လာတော့မယ်။ အဲဒီအခါ ရောဂါကာကွယ်ထိုးဆေး ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းသွားမှာမို့ ဆင်းရဲတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအတွက် သတင်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ဈေးကွက်ကို အနောက်နိုင်ငံ ဆေးဝါးကုမ္မဏီကြီးများ ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့ သူတို့အတွက်တော့ သတင်းကောင်း မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၀၉ခုနှစ် ကမ္ဘာတဝှမ်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ အသစ်အဆန်း ကာကွယ်ဆေးကို တရုတ်ဆေးဝါးကုမ္မဏီတခုက ရက်ပေါင်း၈၇ရက်အတွင်း အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့လို့ တရုတ်နိုင်ငံ ခေတ်မှီဆေးဝါးနည်းပညာ အောင်မြင်မှုကို ကမ္ဘာက အာရုံစိုက်မိလာတယ်။ မတ်လအတွင်း တရုတ်ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်များနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အောင်မြင်ခဲ့ရင် ယူအန်အေဂျင်စီနဲ့ အခြားနိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ရောင်းချဖို့ လမ်းစပွင့် သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါက သတင်းရှေ့ပိုင်းမှာ ရေးထားတာပါ။ ကျနော်က ဆရာဝန်လည်း မဟုတ်တော့ ဒီအကြောင်း ထဲထဲ ဝင်ဝင် မရေးပါဘူး။ ပြောချင်တာ တနေ့တခြား ချမ်းသာလာနေတဲ့ တရုတ်ကြီး အမြင့်ရောက်လေ အခက်အခဲ အသစ်များနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလေ ဆိုတာပါ။ မအောင်မြင်ခင်နဲ့ အောင်မြင်လာချိန်၊ လူတောမတိုးခင်နဲ့ လူဝင်ဆံ့ချိန် ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ အတားအဆီးများ မတူပါဘူး။ ဥပမာ ပေးရရင် ဆင်းရဲချိန် ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ လောကဓံနဲ့ ချမ်းသာချိန် ကြုံတွေ့ရတဲ့ လောကဓံ နှစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလည်း မျက်စိနားပိတ်ထားခဲ့ပြီး ယနေ့လို အခွင့်အလမ်းများ ပြန်လည်ပွင့်လင်းလာချိန်မှာ (ထင်ရတာပဲ) သတိပြုစရာများကို အလေးပေး ပြင်ဆင်ထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား ကာကွယ်ဆေး သုံးစွဲမှုသည် မနှစ်ကထက် ၁၄%မြင့်တက်လာပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် ၂၅.၃ ဘီလျံဒေါ်လာ ရှိလို့ အလွန်မက်စရာ ကောင်းတဲ့ ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ အစားအစာနဲ့ဆေးဝါး လုံခြုံစိတ်ချရမှု မှတ်တမ်းများကတော့ အခြေအနေ မကောင်းပါဘူး။ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ တရုတ်ချောင်းဆိုးပျောက် ဆေးရည်ကြောင့် အလယ်ပိုင်းအမေရိကတိုက်မှာ လူ၉၃ရောက် အသက်ဆုံးပါးခဲ့တယ်။ နောင်တနှစ်ကြတော့ မသန့်စင်တဲ့ blood thinner ဆေးရည်များကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ လူပေါင်းဒါဇင်နဲ့ချီပြီး သေဆုံးရပြီး တရုတ်နိုင်ငံကိုယ်၌ အဆိပ်သင့် နို့မှုန့်များကြောင့် ခလေးခြောက်ဦးသေဆုံးကာ သိန်းပေါင်းများစွာ နာမကျန်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တရုတ်အစိုးရလည်း တတ်နိုင် သလောက်တော့ အရေးယူပေမဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်နဲ့ညီအောင် မထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူး။ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်ကိုဝင်ဖို့ WHO အဖွဲ့ ထောက်ခံချက်ရယူလိုရင် ဆေးဝါးအတု၊ အဆင့် မမှီတဲ့ ဆေးဝါးများကို ပပျောက်အောင် နှိမ်နင်းပေးရပါမယ်။
By GILLIAN WONG | AP – Tue, Nov 29, 2011
ကာကွယ်ဆေးလိုဟာမျိုးကတော့ အသက်နဲ့တော်တော်ဆိုင်သွားပြီမို့ တရုတ်ကြီးကိုယုံဘို့ တော်တော်သတ္တိမွေးရမယ်။
ဘာလုပ်လုပ် ကောင်းမွန်ဆီလျှော်တဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးမှု့က အဓိကပါပဲ။
အဲဒါအရင်မရှိထားပဲ ဘာမှသေသေချာချာလဲမကောင်းနိုင်ပါ။ ကြာကြာလဲမကောင်းနိုင်ပါဘူး။
ဒီတပတ် eleven ဂျာနယ်မှာ လဲ မျက်နှာဖုံးသတင်းမှာ ကို ဝေဖန်ရေးပြထားတယ်..
လက်ရှိတရား စီရင်ရေးစနစ်ဖြစ်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရန် ခက်ခဲ နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့..
အဲဒီထောက်တိုင် တွေအားလုံး ကြံ့ခိုင် ဖို့ကတော့ …အချိန် ??
နောက်ဆုံးတော့ တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်ပေါ့ဗျာ…..
တရုတ်မလေးပါး ငါနမ်းဘို့ ကြိုးစားလိုက်ဦး ကိုကြောင်ကြီးရေ။
ကိုပေါက်ရေ…။ ကျွန်တော်ကတော့ ခုံမြင့်မြင့် တစ်လုံးထက် ဘာလင်တံတိုင်း ဖြိုသလိုဖြို ခဲ့စေချင်တယ်ဗျာ…။ ခုံပေါ်ကနေ ကျော်ကြည့်ရင် ချောကျမှာစိုးလို့ပါ…။
ကိုကြောင်ရေ…ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ မကြာမှီလာမည်ပေါ့နော်…အမေရိကန်ကို လက်တစ်ဖက်ကဆွဲထား ကျန်တဲ့ တစ်ဖက်က တရုတ်ကြီးကိုဖက်ထား…ဗီယက်နမ်သွားပြီးသင်တန်းတက်ထားပြီးပြီလေ..
ကိုယ်တွေရဲ့ တိုင်းပြည်လည်း သူများတွေကို ကြည့်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေ ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ သင်ခန်းစာယူပြီး ပြင်သင့်တာပြင် ၊ ဆောင်သင့်တာဆောင်၊ ပယ်သင့်တာပယ်ပြီး တက်ညီလက်ညီ သွားကြရင် သူတို့ တွေကို တောင် များမကြာမီမှာ ကျော်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်
(အမှန်က ကိုယ့်အိမ်မက်ထဲက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ပြောလိုက်တာ)
လူတွေဟာ တစ်စုံတစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင်လာကြပြီ ဆိုရင်
သေရမှာကို ပိုကြောက်လာ ကြသလိုဘဲ
အဲဒီမှာ ကာကွယ်ဆေး တွေ အရောင်းသွက်တယ် လို့ ထင်ပါတယ်
Ethics နဲ့ တရုတ် ကတော့ ဘယ်တော့များမှ အံဝင်မယ်ဆိုတာ ။
(ဆေးအတု၊ အိပ်စ်ပို့စ်ဝက်သား ပေါက်စီအတွင်းမှကဒ်ထူပြားများ၊ နို့မှုံ့အထဲကမယ်လမင်းအမှုံ့တွေ စားမိလို့ သေလို့ငိုရ) ။
ရှိုက်၍ ရှိုက်၍ သော်လည်းကောင်း
(တရုတ်ကဟိုလိုပြောလိုက် ဒီလိုပြောလိုက် ဟိုကောင်လာခဲ့ အုန်း၊ ဒီကောင် လာခဲ့အုန်း ခဏခဏ ခေါ်လို့)။
စောင့်မျှော်၍ နေ”ဆဲ” ပါ။ နက်ဖန် သို့မဟုတ် ဘယ်သော အခါ။
မောင်ဘုရှ် အီးရတ် ကို ဝင်ဆော်တဲ့အချိန်မှာ
တရုတ်တွေ ချောင်းဆိုးရင်ဖြစ်တဲ့ ဆာ့လား ဘာလား
တစ်ရွာလုံး မျက်နှာဖုံးတွေ တပ်ရတဲ့ ရောဂါဖြစ်သလိုပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
ဒီတစ်ရွာလုံးထဲ ပညာရှင်တွေက ဆိတ်ဆိတ်နေသလား
ဒဂါဂျီးနဲ့ ဦးဘဇင်း နှစ်ခန္ဓာထဲ ဖင်ဂေါင်းလိုက်ကျယ်နေသလား သေခြာတော့သိဘူး
သောက်ချဉ်တွေ ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ဦးဘဇင်းရယ်….။ သံပုရာသီနဲ့ ချဉ်မှာလား ရှောက်သီးနဲ့ ချဉ် မှာလား သိချင်စမ်းပါရဲ့……….။
တရုတ်က သူ့အရှိန်ကို သူပြန်မထိန်းနိူင်တာလို့ ထင်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်မှာ ဓါတုပစ္စည်းကုန်ကြမ်းတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အတိုင်းအဆမရှိ ၀ယ်နိူင်ပါတယ်။အခုမှ နည်းနည်းပြန်တင်းကျပ် ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကို တန်ချီပြီးတင်သွင်းနေတာဘဲ ကြည့်ပါ။